Gadziriro dzekickboxing dzave padanho repamusoro
Gadziriro dzekickboxing dzave padanho repamusoro	Saturday, 11 August 2012 19:14	View Comments
neMunyori weKwayedzaGADZIRIRO dzemakwikwi eInternational Heroes Cup Kickboxing ayo ari kuzoitwa muno musi wa18 mwedzi uno dzave padanho repamusoro uye nyika dzakakokwa dza­kazivisa kuti dziri kuuya.
Mutungamiriri wesangano reZimbabwe Kickboxing Association, iro riri kuronga mu­tambo uyu, Tony Kamangira akati makwikwi aya achange akasiyana kana achienzaniswa neegore rapera.
“Tava padanho repamusoro nekugadzirira mitambo iyi uye tiri kutarisira kuti mutambo wegore rino uchange wakasiyana newegore rakapera apo takautanga.
“Tiri kutarisira nyika dzakaita seFinland neEquatorial Guinea mumutambo wezuva rimwe chete uyu,” akadaro.“Tinoda kukurudzira veruzhinji kuti vatarisire kukunda kubva kuchikwata chenyika yedu nekuti takagadzirira zvakak­wana.
“Tiri kutora mitambo iyi semukana weku­gadzirira makwikwi eKickboxing African Championship ayo achaitirwa kuMadagascar mwedzi unouya zvekare,” akaenderera mberi.
Kamangira akati mushure memakwikwi aya, chishuwo chavo chinenge chava chekunotora menduru zhinji kuMadagascar.Chikwata cheZimbabwe chakaisa tariro ku­vatambi vanosanganisira Brighton Tangata, Nicholas Kurimira naRonald Deketeke.